17 / 04 / 2021 17 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 864 Views စာ0မှတ်ချက် 20th နှစ်ပတ်လည်, ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ၇၆၃၈၆ HogwartWizard ရဲ့စစ်တုရင်, 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger, 76394 Fawkes Dumbledore ရဲ့ Phoenix, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, ကြိုတင်မှာယူပါ
အချို့သော Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ နှစ်ပတ်လည် VIP အချက်များအဖြစ်အပျက်စတင်ခဲ့သည့်အတိုင်းတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်ကြိုတင်မှာယူမှုအတွက်နှစ်ပတ်လည်ပွဲများရှိသည်။
ယခုအသစ်စက်စက်အနည်းဆုံးအနည်းငယ်ကိုယခုသင်သေချာအောင်လုပ်နိုင်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ဖြန့်ချိသည့်နေ့အပြီးတွင်မော်ဒယ်လ်များသည်သင်၏တံခါးသို့မကြာမီလာမည်။ စုဆောင်းမှုအားလုံးနီးပါးကိုယခုမှစောစောမှာယူနိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့် LEGO.com.
ကြိုတင်မှာယူမှုအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသူတို့၏တောင်းများထဲသို့သုံးခုသာထည့်နိုင်သည်။ ၇၆၃၈၆ HogwartWizard ရဲ့စစ်တုရင်, 73693 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger နှင့် 73694 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ်
အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပရှိရေကန်တစ်လျှောက်တွင်နေထိုင်နေလျှင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်မှုစုစုပေါင်း ၄ ခုရှိသည် - ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း.
ဆိုလိုသည်မှာလက်ရှိအမိန့်မရနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအစုံသည်ဆိုလိုသည် ၇၆၃၈၆ Hogwartပထမပျံသင်ခန်းစာ, ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်အကွာအဝေးနှင့်အတူလွှတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဤအစောပိုင်းမှာကြားမှုအဆင့်တွင်ဒေသများအကြားလှိုင်းတံပိုးကိုခွဲခြမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်စတော့ရှယ်ယာအလုံအလောက်ရှိစေရန်ဖြစ်သည်၊ VIP အထူးသီးသန့်အခြေအနေမျိုးမှရှောင်ရှားနိုင်သည် Ulysses အာကာသစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး.
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုဤအစုများကိုမကြာမီကြိုတင်မှာယူပါကသင်ဝယ်ယူမှုတစ်ခုလုံးတွင်နှစ်ဆ VIP အချက်များကိုအသုံးချနိုင်ပြီးအခြားအချက်များအတွက်ထိုအချက်များကိုချွေတာနိုင်သည်။ Lego ယခုနှစ်အတွက်အုပ်စုတွင်စတိုးဆိုင်ရှိသည်။
← တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: လမ်းပြေးသမား
LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာအသစ်များတွင်သင်လွဲချော်နိုင်သည့်အရာငါးခု →